तपाईंले वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ परमेश्‍वरले व्यक्तिगत रूपमा बोल्नुभएको वाणी हो भनी गवाही दिनुहुन्छ, तैपनि कतिपय मानिसहरूले यी वचनहरू पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि पाउने कुनै व्यक्तिले बोलेका वचनहरू हुन् भनी विश्‍वास गर्छन्। देहधारी परमेश्‍वरले बोल्नुभएका वचनहरू र पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि पाएको कुनै व्यक्तिद्वारा बोलिएका वचनहरूको बीचमा के भिन्नता हुन्छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरको वचनलाई मानिसको वचन बनाउन सकिंदैन, अनि मानिसको वचनलाई कसैले परमेश्‍वरको वचन बनाउने कुरा त परै छाँड़ौ। परमेश्‍वरद्वारा प्रयोग गरिएको मानिस देहधारी परमेश्‍वर होइन, अनि देहधारी परमेश्‍वर परमेश्‍वरद्वारा प्रयोग गरिएको मानिस होइन। यसमा, एउटा आधारभूत भिन्नता हुन्छ। सायद, यी वचनहरू पढिसकेपछि तँ तिनलाई परमेश्‍वरका वचनहरू मान्दैनस्, तर मानिसले प्राप्त गरेको अन्तर्दृष्टि मात्र ठान्छस् होला। त्यस्तो अवस्थामा, तँ अज्ञानताले अन्धो भएको छस्। परमेश्‍वरको वचन कसरी मानिसले प्राप्त गरेको अन्तर्दृष्टि जस्तो हुन सक्छ? देहधारी परमेश्‍वरका वचनहरूले एउटा नयाँ युग सुरु गर्दछ, सारा मानवजातिलाई डोऱ्याउँछ, रहस्यहरू प्रकट गर्दछ, र मानिसले त्यो नयाँ युगमा लिनुपर्ने दिशा देखाउँदछ। मानिसले प्राप्त गरेको अन्तर्दृष्टि भनेको अभ्यास वा ज्ञानका लागि सरल निर्देशनहरू मात्र हो। यसले सम्पूर्ण मानवजातिलाई नयाँ युगमा डोऱ्याउन वा परमेश्‍वर स्वयमका रहस्यहरू प्रकट गर्न सक्दैन। जब सबै कुरा भनिन्छ र गरिन्छ, परमेश्‍वर परमेश्‍वर हुन्छ, र मानिस मानिस नै हुन्छ। परमेश्‍वरसित परमेश्‍वरको सार छ, र मानिससित मानिसको सार छ। यदि मानिसले परमेश्‍वरले बोल्नुभएका वचनहरूलाई पवित्र आत्माले दिनुभएको सरल अन्तर्दृष्टिको रूपमा हेर्छ भने र प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूले बोलेका वचनलाई परमेश्‍वरले व्यक्तिगत रूपमा बोल्नुभएको वचनको रूपमा लिन्छ भने, त्यो मानिसको गल्ती हुनेछ। चाहे जे भए पनि, तैँले कहिल्यै पनि सही र गलतलाई मिसाउनु हुँदैन, उच्चलाई निम्न बनाउनुहुँदैन, वा गम्भीरलाई हलुका बनाउनु हुँदैन; चाहे जे भए पनि जुन कुरा सत्य हो भनी जान्दछस् त्यसलाई जानीजानी खण्डन गर्नु हुँदैन। परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी विश्‍वास गर्ने सबैले सही दृष्टिकोणबाट समस्याहरू जाँच्नुपर्छ, र परमेश्‍वरको नयाँ कार्यलाई र उहाँका नयाँ वचनहरूलाई उहाँद्वारा सृष्टि गरिएको प्राणीको परिप्रेक्ष्यबाट स्वीकार गर्नुपर्दछ; नत्र, तिनीहरूलाई परमेश्‍वरद्वारा हटाइनेछन्।
मानिसको अभ्यास गर्ने तरिकाहरू र सत्यता सम्बन्धी उसको ज्ञान निश्‍चित क्षेत्रमा लागू हुन्छन्। मानिसले पछ्याउने मार्ग पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माको इच्छा हो भनी भन्‍न सकिँदैन, किनकि मानिस पवित्र आत्माद्वारा मात्रै प्रकाशित हुन सक्छ, र पवित्र आत्माद्वारा पूर्ण रूपमा भरिन सक्दैन। मानिसले अनुभव गर्न सक्‍ने कुराहरू सबै सामान्य मानवताको क्षेत्रभित्र पर्छन् र यसले सामान्य मानव मनमा भएको सोचविचारको दायरालाई नाघ्‍न सक्दैन। अनुभवको सत्यता वास्तविकतामा जिउन सक्‍नेहरू यही दायराभित्र पर्छन्। जब तिनीहरूले सत्यताको अनुभव गर्छन्, यो सँधै पवित्र आत्माद्वारा प्रकाशित सामान्य मानव जीवनको अनुभव हो; यस किसिमको अनुभव सामान्य मानव जीवनबाट विचलित हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो मानव जीवन जिउने कार्यको आधारमा पवित्र आत्माको प्रकाशको सत्यता अनुभव गर्छन्। साथै, यो सत्यता व्यक्ति पिच्छे फरक हुन्छ, र यसको गहिराइ व्यक्तिको अवस्थामा निर्भर रहन्छ। व्यक्तिले हिँडिरहेको मार्ग सत्यता पछ्याउने कसैको सामान्य मानव जीवन हो भनेर मात्रै भन्‍न सकिन्छ, र यसलाई पवित्र आत्माद्वारा प्रकाशित सामान्य व्यक्तिले हिँड्ने मार्ग हो भनी भन्‍न सकिन्छ। उनीहरूले हिँड्न मार्ग नै पवित्र आत्माले लिनुहुने मार्ग हो भनी भन्‍न सकिँदैन। सामान्य मानवीय अनुभवमा, मानिसहरूले उही मार्ग पछ्याउँदैनन्, त्यसकारण पवित्र आत्माको काम पनि उही किसिमको हुँदैन। साथै, मानिसहरूले अनुभव गर्ने वातावरण र उनीहरूको अनुभवको दायरा उही नहुने भएकोले, र तिनीहरूको मन र सोचविचारको मिश्रणको कारण, तिनीहरूको अनुभव फरक-फरक हदमा मिश्रित हुन्छन्। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो फरकपन र व्यक्तिगत अवस्थाहरू बमोजिम सत्यतालाई बुझ्‍छ। सत्यताको वास्तविक अर्थ सम्बन्धी उनीहरूको बुझाइ पूर्ण हुँदैन र यो केवल त्यसको एउटा पक्ष वा केही पक्षहरू मात्र हुन्छन्। मानिसले अनुभव गर्ने सत्यताको क्षेत्र पनि व्यक्तिको अवस्था अनुसार व्यक्ति पिच्छे फरक हुन्छ। यस किसिमले, उही सत्यताको ज्ञान पनि फरक मानिसहरूले व्यक्त गर्दा उही हुँदैन। मानिसको अनुभवमा सधैँ सीमितता हुन्छ र यसले पवित्र आत्माको इच्छालाई पूर्णरूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, न त मानिसको कामलाई परमेश्‍वरको कामको रूपमा हेर्न सकिन्छ, चाहे मानिसले व्यक्त गर्ने कुरा परमेश्‍वरको इच्छासँग मिल्दोजुल्दो नै किन नहोस् र चाहे मानिसको अनुभव पवित्र आत्माको सिद्ध तुल्याउने कामसँग मिल्दोजुल्दो नै किन नहोस्। परमेश्‍वरले उसको जिम्मामा सुम्पिदिनुभएको काम गर्दै मानिस परमेश्‍वरको सेवक मात्र बन्‍न सक्छ। पवित्र आत्माले दिनुभएको ज्ञानलाई र उसले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवहरूबाट प्राप्त गरेका सत्यताहरूलाई मात्रै मानिसले व्यक्त गर्न सक्छ। मानिस अयोग्य छ र उसले पवित्र आत्माको माध्यम बन्‍नको लागि आवश्यक सर्तहरू पूरा गर्दैन। उसको काम परमेश्‍वरको काम हो भन्‍ने अधिकार उसलाई दिइएको छैन।
जुन कुरा परमेश्‍वरले प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो सत्यता हो। पवित्र आत्‍माको अन्तर्दृष्टिद्वारा पैदा हुने जुनसुकै कुरा सत्यताअनुरूप मात्रै हुन्छ, किनभने पवित्र आत्‍माले मानिसहरूको कदको आधारमा मात्रै अन्तर्दृष्टि दिनुहुन्छ र मानिसलाई प्रत्यक्ष रूपमा सत्यता व्यक्त गर्न सक्‍नुहुन्‍न। यो तैँले बुझ्‍नैपर्ने कुरा हो। अनि जब मानिसहरूले सत्यताका वचनहरूको आधारमा अनुभवबाट अन्तर्दृष्टि, र ज्ञान प्राप्त गर्छन्, के त्यस्तो अन्तर्दृष्टि र ज्ञान सत्यताको रूपमा गन्ती हुन्छ? बढीमा, यो सत्यताको थोरै ज्ञान मात्र हो। पवित्र आत्‍माले अन्तर्दृष्टि दिनुभएका वचनहरूले परमेश्‍वरका वचनहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, तिनले सत्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, ती सत्यताको स्वामित्वमा हुँदैनन्; ती त सत्यताका थोरै ज्ञान, पवित्र आत्‍माको थोरै अन्तर्दृष्टि मात्र हुन्। यदि मानिसहरूले सत्यताको केही ज्ञान प्राप्त गर्छन् र त्यसलाई अरूमा आपूर्ति गर्छन् भने, यो पनि व्यक्तिगत ज्ञान र अनुभवको आपूर्ति हो। त्यो मानिसहरूलाई सत्यता आपूर्ति गर्नु होइन। यसलाई सत्यताको सङ्गति गर्नु भनेर भन्‍न सकिन्छ—यसलाई उल्‍लेख गर्ने उचित तरिका यही हो। यो सरल विषय होइन र धेरैजसो मानिसहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्‍न सक्दैनन्, त्यसकारण तैँले यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्‍नुपर्छ; यो केवल सही शब्‍दहरूको मामला होइन, वा तैँले केही अर्थ-अनुवाद मात्रै बुझ्‍नुपर्छ, त्योभन्दा बढी केही पनि बुझ्नुपर्दैन भन्‍ने कुरा होइन। तैँले सत्यताबाट केही कुरा, अर्थात् मानिसले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरू प्राप्त गरेको हुन सक्छस्, तर यसको अर्थ तैँले सत्यता प्राप्त गरेको छस् भन्‍ने हुँदैन। अनि तैँले सत्यताबाट अझै अरू कुराहरू प्राप्त गरेको हुन सक्छस्, तर यसको अर्थ तँसँग अब सत्यताको जीवन छ भन्‍ने हुँदैन, तँ सत्यताको होस् भनेर भन्‍न सकिने त कुरै नगरौं—अवस्था पूर्णतया त्यो होइन। तैँले आफ्‍नो जीवनलाई पौष्टिकता प्रदान गर्न सत्यताबाट केही पौष्टिक कुरा प्राप्त गरेको मात्र होस्, ताकि तँसँग कुनै यस्तो कुरा होस्, जुन तँसँग हुनुपर्छ, जसले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छ र परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्छ। परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई भरणपोषण गर्न सत्यताको प्रयोग गर्नुहुन्छ, अनि सत्यताद्वारा तिनीहरूलाई उहाँलाई सन्तुष्ट पार्न र उहाँको हृदयअनुसारको बन्‍न दिनुहुन्छ। अन्त्यमा, मानिसहरूले परमेश्‍वरको इच्‍छालाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट पारिसकेपछि पनि तिनीहरूलाई सत्यताको हो भनेर भन्‍न सकिँदैन, तिनीहरूभित्र सत्यताको जीवन छ भनेर भन्‍न सकिने त कुरै नगरौं। … हरेकले सत्यताको अनुभव गर्छन्, तर हरेकले फरक-फरक परिस्‍थितिहरूमा त्यसो गर्छन्, र हरेकले फरक-फरक कुरा प्राप्त गर्छन्। तैपनि, तिनीहरूको ज्ञानलाई जोडिन्थ्यो भने पनि, तिनीहरूले अझै एउटा सत्यतालाई पनि पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न सक्‍नेथिएनन्। सत्यता त्यति गहन छ! तैँले प्राप्त गरेका कुराहरू र तेरो ज्ञान सत्यताको स्थानमा उभिन सक्दैनन् भनेर किन भनिन्छ त? तैँले अरूसँग आफ्‍नो ज्ञानबारे सङ्गति गर्छस्, र तिनीहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा अनुभव गर्नको लागि दुई-तीन दिन मात्रै मनन गर्नुपर्छ। तर मानिसहरूले सम्पूर्ण जीवनकाल नै बिताए पनि अझै सत्यतालाई पूर्ण रूपमा अनुभव गर्न सक्दैनन्; हरेक व्यक्तिले अनुभव गरेको कुरालाई जोडिन्थ्यो भने पनि, सत्यतालाई अझै पनि पूर्ण रूपमा अनुभव गरिएको हुनेथिएन। त्यसकारण सत्यता असाधारण रूपमा गहन छ भनेर देख्‍न सकिन्छ। सत्यतालाई शब्‍दहरूमा पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। मानिसको भाषामा, सत्यता नै मानवजातिको साँचो सार हो। मानिसले कहिल्यै पनि सत्यतालाई पूर्ण रूपमा अनुभव गर्न सक्‍नेछैन। मानिस सत्यताद्वारा जिउनुपर्छ। केवल एउटा सत्यताले सारा मानवजातिको अस्तित्वलाई हजारौं वर्षसम्‍म थाम्‍न सक्छ।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूको “सत्य वास्तवमा के हो भन्ने के तँलाई थाहा छ?” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वर स्वयमको जीवन नै सत्यता हो; यसले उहाँको स्वभाव, उहाँको सार र उहाँमा भएका सबै थोकको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यदि तैँले थोरै अनुभव हुनु नै सत्य धारण गर्नु हो भनी भन्छस् भने, के तैँले परमेश्‍वरको स्वभावको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छस्? तँसँग सत्यताको कुनै एक तत्व वा पक्षको बारेमा केही अनुभव वा ज्योति हुनसक्छ, तर तैँले अरूलाई त्यो सधैँभरि दिन सक्दैनस्, त्यसैले तैँले प्राप्त गरेको यो ज्योति सत्यता होइन; यो एक निश्चित बिन्दु मात्र हो, जहाँ मानिसहरू पुग्न सक्छन्। यो व्यक्तिमा हुनुपर्ने उचित अनुभव र सही बुझाइ मात्र हो: सत्यको केही वास्तविक अनुभव र ज्ञान। यो ज्योति, अन्तर्दृष्टि, र अनुभव सम्‍बन्धी बुझाइले कहिल्यै पनि सत्यको स्थान लिन सक्दैन; यदि सबै मानिसहरूले यो सत्यताको पूर्ण अनुभव गरेका थिए भने पनि, र तिनीहरूका सबै अनुभव सम्‍बन्धी बुझाइहरूलाई एकसाथ जम्‍मा गरे पनि त्यसले अझै पनि सत्यताको स्थान लिन सक्नेछैन। विगतमा भनिएजस्तै, “म यसलाई मानव संसारका लागि एउटा सूत्रको रूपमा जोड्छु: मानिसहरूका माझमा, मलाई प्रेम गर्ने कोही पनि छैन।” सत्यताको अभिव्यक्ति यही हो: जीवनको साँचो सार यही हो। यो सबै थोकहरूभन्दा अति नै गम्भीर छ; यो परमेश्‍वर स्वयम्‌को एक अभिव्यक्ति हो। तैँले यसको अनुभव गरिरहन सक्छस्, र यदि तैँले तीन वर्षसम्म यसको अनुभव गरिस् भने तँसँग यसको सतही बुझाइ हुनेछ; यदि तैँले सात वा आठ वर्षसम्म यसको अनुभव गरिस् भने तैँले यसको अझ धेरै बुझाइ प्राप्त गर्नेछस्—तर तैँले प्राप्त गर्ने कुनै पनि बुझाइले कहिल्यै पनि सत्यको एउटा अभिव्यक्तिको स्थान लिन सक्नेछैन। अर्को व्यक्तिले केही वर्षसम्म यसको अनुभव गरिसकेपछि थोरै बुझाइ प्राप्त गर्न सक्दछ, र फेरि दश वर्षसम्म यसको अनुभव गरेपछि थप बढी गहन बुझाइ प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसपछि आजीवन यसको अनुभव गरेपछि थप बढी समझ प्राप्त गर्न सक्छ—तर यदि तिमीहरूले दुवैले प्राप्त गरेका बुझाइलाई जोड्यौ भने पनि—तिमीहरू दुवैमा जति धेरै बुझाइ भए पनि, जति धेरै अनुभव भए पनि, जति धेरै अन्तर्दृष्टि भए पनि, जति धेरै प्रकाश भए पनि, जति नै धेरै उदाहरणहरू भए पनि—ती सबैले पनि सत्यको एउटा अभिव्यक्तिको स्थान लिन सक्दैन। मेरो यो भनाइको अर्थ के हो? मेरो भनाइको अर्थ यो हो कि मानिसको जीवन सधैँ मानिसको जीवन नै हुनेछ, र तेरो बुझाइ सत्यता, परमेश्‍वरका अभिप्रायहरू र उहाँका मापदण्डहरूसित जति नै मिले पनि, त्यसले कहिल्यै पनि सत्यको स्थान लिन सक्दैन। मानिसहरूले सत्यता प्राप्त गरेका छन् भन्नुको अर्थ तिनीहरूमा केही वास्तविकता छ, तिनीहरूले सत्यताका केही बुझाइ प्राप्त गरेका छन्, तिनीहरूले परमेश्‍वरको वचनहरूमा केही वास्तविक प्रवेश पाएका छन्, तिनीहरूले आफूमा केही वास्तविक अनुभव प्राप्त गरेका छन् र तिनीहरू परमेश्‍वरमाथिको आफ्नो विश्‍वासको सही मार्गमा छन् भन्ने हुन्छ। परमेश्‍वरबाटको एउटा अभिव्यक्ति समेत व्यक्तिको सम्पूर्ण जीवनकालको लागि अनुभव गर्न पर्याप्त हुन्छ; यदि मानिसहरूले धेरै वटा जीवनकालमा वा केही हजार वर्षसम्म यसको अनुभव प्राप्त गरे भने पनि तिनीहरूले एउटा सत्यतालाई पूरै र सम्पूर्ण रूपले अनुभव गर्न सक्नेछैनन्।
अघिल्लो: व्यवस्थाको युगमा यशैया, इजकिएल, र दानिएल अगमवक्ताहरूद्वारा व्यक्त गरिएका परमेश्‍वरका वचनहरू र देहधारी परमेश्‍वरद्वारा व्यक्त गरिएका परमेश्‍वरका वचनहरूका बीचमा के भिन्नता छ?
अर्को: तपाईंले प्रभु येशू फर्केर आउनुभएको छ, उहाँ सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको अवतार हुनुहुन्छ, उहाँले मानवजातिलाई शुद्ध पार्न र मुक्ति दिन सक्‍ने सबै सत्यताहरू व्यक्त गर्दैहुनुहुन्छ, र उहाँले परमेश्‍वरको घरबाट नै सुरु गर्दै न्यायको काम गर्दैहुनुहुन्छ भनेर गवाही दिनुहुन्छ। त्यसो भए हामी परमेश्‍वरको आवाज कसरी चिन्न सक्छौं, र सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर फर्केर आउनुभएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनी कसरी निश्चित हुन सक्छौं?